« Toe-tsaina »
Mbola mitana ny sain’ny maro ilay lozam-piarakodia nahafatesan’olona tetsy amin’ny Rocade Andohatapenaka afakomaly iny. Toa eo amin’ilay toerana nitrangan’io loza io foana mantsy no natetika nisehoan’ny loza mahatsiravina. Hamoizana ain’olona hatrany, ary potika tanteraka ny …Tohiny
Mialoha ny hiatrehana fitetezam-paritra any Eoraopa. Hanolotra seho farany eto an-drenivohitra ho an’ireo mpankafy azy i Joseph d’Af, ary manome fotoana azy ireo ny alahady 16 septambra izao manomboka amin’ny 3 ora tolakandro etsy Antsahamanitra. …Tohiny
Nataon’ny mpitondra nifandimby zanak’Ikalahafa hatrany ny Faritra na Kaominina iray rehefa mpanao politika na olom-boafidy tsy avy amin’ny antokon’ny mpitondra no lany tao amin’ilay toerana ary izany no mahatonga ireny Kaominina sasany ireny ho taraiky ...Tohiny